के कार्बनिक खोज अनुकूलन अझै पनि सान्दर्भिक छ?
यदि तपाईंले Google Analytics सँग काम गर्नुभयो भने, तपाईंले शायद थाहा पाउनु भएको छ कि त्यहाँ चार मुख्य ट्राफिक स्रोतहरु - जैविक (खोज), रेफरल, सामाजिक र भुक्तानी. तपाईंले सोशल मिडिया च्यानलहरू र सशुल्क विज्ञापनबाट ट्राफिक प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तर तपाईंको रैंकिङ वेबसाइट प्रासंगिकताको प्रमुख कारकको रूपमा उच्च हुँदैन, र एसईओ मित्रतागत जैविक यातायातको उच्च प्रवाह हो।.
आजकल, हामी एक परिवर्तनीय र विविधता को दुनिया मा रहछन जहां मान्छे को जैविक खोज अनुकूलन को धेरै विकल्प मिलयो. हामी वेतन-प्रति-क्लिक विज्ञापन प्रयोग गर्दछौं, सामाजिक प्लेटफर्महरूमा पहिचानहरू सिर्जना गर्दछौं र सामाजिक मिडिया च्यानलहरूको माध्यमबाट हाम्रा उत्पादनहरू र सेवाहरू प्रवर्द्धन गर्दछौं. वेबसाइट मालिकहरू अधिक जीवन बिताउन र Google मा उनीहरूको वेबसाइटको प्लेसमेन्टबाट मर्छन्, आफ्नो रेटिङ्का लागि कार्बनिक सूचीबद्ध महत्त्वको बारेमा बिर्सन्छन्. तथापि, जैविक ट्राफिकले अझै दर्जनौं सुधारको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ. सांख्यिकीय डेटा अनुसार, जैविक खोज ट्रम्पहरू अन्य ट्राफिक जनरेटरहरू, B2B र B2C व्यवसायहरूको लागि सबै संभावित ग्राहकको लगभग 51% ड्राइभ गर्दै.
के तपाईंलाई अझै जैविक खोज अप्टिमाइजेसन चाहिन्छ?
जैविक खोजी अप्टिमाइजेशन सञ्चालन गर्ने गुणस्तर खोज ट्राफिकलाई आकर्षित गर्न एकमात्र विकल्प हो. कार्बनिक प्रासंगिक ट्राफिक डिलिवरी को लागी एकदम राम्रो छ. एकमात्र च्यानल जसले तपाईंलाई लगभग सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ सशुल्क खोज विज्ञापनहरू. यद्यपि, सशुल्क खोज मात्र कुल कुल यातायात को 10% को लागि जिम्मेदार छ. अधिकतर एसईओ गुरु को लगानी मा ठूलो फिर्ती प्राप्त गर्न जैविक र सशुल्क सर्च यातायात मा निवेश गर्न सल्लाह. उदाहरणका लागि, टेक्नोलोजी र दबाइ उद्योगहरूमा, यस्तो मिश्रण गरिएको दृष्टिकोणले कुल राजस्वको दुई-तिहाई भन्दा बढी बनाउँछ.
सोशल मिडिया च्यानलहरूको माध्यमबाट ट्राफिकलाई आकर्षित गर्न एक आधुनिक प्रवृत्ति हो. तपाईंले फेसबुक र इन्स्टाग्रामबाट तपाईंको ट्राफिकको 40 देखि 60 प्रतिशतसम्म प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तर कुनै पनि वेबसाइटको उपस्थिति सुधार नदेखाउनुहोस्. यो स्थिति इन्जिन को खोज गर्न को लागि यस तरिका को यातायात को थोडा सा संकेत द्वारा व्याख्या गर्न सकिन्छ. सामाजिक ट्राफिक अतिरिक्त ट्राफिक स्रोत हुन सक्छ तर प्रमुख होइन. यसबाहेक, जब तपाइँ साइट ट्राफिक प्राप्त गर्न सोशल मिडिया च्यानलहरू लागू गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं सोशल प्लेटफर्मको दयामा हुनुहुन्छ. यसको मतलब यो छ कि तपाईंलाई हरेक समय को लागी एक सोशल मीडिया प्लेटफर्म को व्यापार खाताहरु को लागी आफ्नो नियमहरु लाई बदलन को फैसला को आवश्यकता हुनेछ. तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि एउटै परिस्थिति Google कार्बनिक खोज अनुकूलनको साथ हुन सक्छ. म भन्न सक्छु कि यो निर्भर गर्दछ. निस्सन्देह, तपाईंको रैंकिंगले एल्गोरिदम परिवर्तनको कारण पनि घटाउन सक्छ. यद्यपि, कार्बनिक खोज अप्टिमाइजेसनको स्थितिमा, यो सम्भावित तपाईंको साथ छैन, र यदि भएपनि, तपाइँ छोटो अवधि भित्र पछाडि आफ्नो स्थान पाउनुहुनेछ।.
कार्बनिक एसईओ युक्तिहरु
सुनिश्चित गर्नुहोस कि तपाईंको प्रासंगिक र सटीक यूआरएल. तपाईको यूआरएलहरूलाई तपाईको संरचनामा सबैभन्दा ट्राफिक-प्राप्त गर्ने शब्दहरू समावेश गर्ने अनुकूलन गर्नुहोस्.
तपाईसँग तपाईको वेबसाइटको सामाग्रीको भरपर्दो शब्दहरूको स्वस्थ ब्यालेन्सको आवश्यकता छ. एक पृष्ठमा अति धेरै कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग नगर्नुहोस्. औसत रकम प्रति पृष्ठमा तीन खोज सर्तहरू हो. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले सान्दर्भिक कुञ्जीहरू शीर्षकहरूमा, क्यापिटल वाक्यहरू र अनुच्छेदको माथिको नजिक समावेश गर्दछ.
खोजीबाट थप प्रयोगकर्ताहरू आकर्षित गर्न कार्यविधिहरू लाई कल गर्नुहोस्. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको वेबसाइटले तपाईंको आगन्तुकलाई केही कार्यहरू गर्नका लागि सोध्दछ. उदाहरणका लागि, "अहिले किन्नुहोस्," "अर्डरमा एक क्लिक" वा "आज नि: शुल्क उद्धरण पाउनुहोस्।". "सीटीए पदोन्नति को एक जैविक तरिका हो जुन तपाईंको ग्राहकहरु लाई तपाईंको साइट मा गहिरो क्लिक गर्दछ Source .